Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaaray Garoowe | KEYDMEDIA ONLINE
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaaray Garoowe
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa kuwada sugan Garoowe si ay uga qeyb galaan aaska marxuum Xasan Abshir Faarax.
Muqdisho, Soomaaliya – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, ayaa saaka gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntalnd.
Ra’iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo ay ku jiraan madaxda Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed ay wehlinayeen, ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Madaxweynayaasha Puntland, Galmudug, iyo Jubaland oo maalin kahor halkaas gaaray.
Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu aasayaa maydka Allaha Unaxariistee Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Abshir Faarax oo dhawaan ku geeriyooday dalka Turkiga, isla markaana saaka Maydkiisa Muqdisho Janaaso lagula tukaday, waxaana ka qeyb galaya RW dalka iyo madaxda Maamul Goboleedyada.
Kheyre iyo madaxda Maamul Goboleedyada ayaa aaska kadib ku soo laaban doono magaalada Dhuusamareeb oo ay taalo gogosha shirka wada-tashi ee lagu gorfeynayo arrimaha siyaawsadda iyo doorashooyinka muranka ka taagan.
Dhinaca kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in Ra’iisul wasaaraha uu kulamo la qaadan doono inta uu ku suganyahay Garoowe bulshda qeybaheeda kala duwan xili uu jiro Khilaaf u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo maamulka Madaxweyne Deni.
0 Comments Topics: galmudug garowe puntland xasan cali kheyre
Puntland oo fashilisay qarax ka dhici lahaa Boosaaso
Warar 18 February 2021 16:26